Midowga Yurub wuxuu si rasmi ah hawadooda uga xiraa diyaaradaha Belarusiya
Bogga ugu weyn » Wararka safarka Yurub » Midowga Yurub wuxuu si rasmi ah hawadooda uga xiraa diyaaradaha Belarusiya
Golaha yurub ayaa maanta go'aansaday in la xoojiyo talaabooyinka xadidan ee jira marka la fiiriyo xaalada Belarus iyadoo la soo bandhigayo mamnuucida hawada sare ee hawada EU iyo marinka garoomada EU ee diyaaradaha xamuulka qaada ee noocyadeeda kala duwan.
Golaha yurub wuxuu ku dhawaaqay mamnuucida bustayaasha diyaaradaha Belarusiya
Xubnaha EU waxaa laga rabaa inay u diidaan ogolaanshaha inay la dagaan, ka duulaan ama si xad dhaaf ah dhulalkooda ugu diraan diyaarad kasta oo ay ku shaqeeyaan diyaaradaha qaada Belarusiya.
Mamnuucida Midowga Yurub ayaa timid kadib afduubkii diyaaradda Ryanair
Dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub waxay si rasmi ah xayiraad ugu soo rogeen dhamaan maraakiibta diyaaradaha ee Belarus inay soo galaan hawada EU. Mamnuucida oo dhameystiran waxay imaaneysaa kadib markii la xiray Roman Protasevich oo u ololeeya mucaaradka dibad joogga ah oo ay xireen kalkaaliyayaasha maamulka Belarus kadib Ryanair Duulimaadyadii isaga siday ayaa la afduubay oo lagu qasbay inuu ka dego Minsk 23-kii May.
Golaha Yurub wuxuu ku dhawaaqay go'aanka mamnuucida bustaha maanta, kadib wadatashi dhexmaray diblomaasiyiinta ugu sareysa Midowga Yurub.
Midowga Yurub Wadamada xubnaha ka ah "waxaa laga rabaa inay diidaan ogolaanshaha inay la dagaan, ka duulaan ama si xad dhaaf ah dhulalkooda ugu soo diraan diyaarad kasta oo ay ku shaqeeyaan diyaaradaha xambaara diyaaradaha Belarusiya."
Mamnuucidan ayaa sidoo kale saameyneysa wadayaasha iibiya kuraasta diyaaradaha ay maamusho shirkad kale, waxayna dhaqan gelaysaa saqda dhexe (22:00 GMT), isla maalintaas.
Mamnuucida dhamaan yurub waxay imaaneysaa labo maalmood kadib markii Hay'ada Badbaadada Duulista Hawada ee Midowga Yurub (EASA) ay cusbooneysiisay 'talo soo jeedinteeda' in xambaarayaasha ka socda Midowga Yurub ay ka fogaadaan Belarus xayiraad buuxda. EASA ayaa soo saartay "Dardaaranka Badbaadada" iyadoo sheegaysa in shirkadaha diyaaradaha ee midowga yurub aysan soo gali karin hawada Belarusiya marka laga reebo xaalad deg deg ah.
Afduubkii diyaaradda Ryanair ee dhacay 23-kii Maajo ayaa argagax joogto ah ku reebay warshadaha caalamiga ee safarka hawada. Diyaaradda oo ka soo ambabaxday Griiga kuna sii jeeday Lithuania, ayaa la afduubay oo lagu qasbay inay ku degto Minsk sababo la xiriira hanjabaad bambo oo been ah. Baahnayn in la sheego, bambo lagama helin diyaaradda, halka asalka iyo waqtiga 'fariinta digniinta ah' ay si cad u tilmaamayso 'hawlgalkii gaarka ahaa' ee uu qabtay Belarus KGB.
Isla markii lagu qasbay inay ka degto garoonka Minsk, wakiilo ka socda amniga Belarusiya ayaa diyaaradda fuulay waxayna xireen Protasevich oo ay doonayeen maamulkii Lukashenko iyo saaxiibtiis, muwaadin Ruush ah Sofia Sapega.